macOS Mojave - ငါ Mac | ငါ Mac (စာမျက်နှာ ၂)
MacOS US မှာရှိတဲ့ Mojave
MacOS Mojave 10.14.5 နှင့် tvOS 12.3 တို့ကိုလည်း download ရယူနိုင်သည်
MacOS Mojave 10.14.5 နှင့် tvOS 12.3 ဗားရှင်းသစ်ကိုယခုအချိန်တွင် download ပြုလုပ်နိုင်သည်
MacOS 10.14.5 ၏တတိယ beta, tvOS 12.3 နှင့် watchOS 5.2.1 ကို developer များအတွက်ရရှိနိုင်သည်
MacOS Mojave 10.14.5 မှ စတင်၍ Apple ၏ဆာဗာများသည်၎င်း၏ operating system အားလုံး၏ beta ကိုစတင်ရန်လည်ပတ်ခဲ့သည်
MacOS 10.14.5 နှင့် tvOS 12.3 ၏ဒုတိယအကြိမ် beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Cupertino မှယောက်ျားများသည် tvOS 10.14.5 နှင့် iOS 12.3 နှင့်အတူပါလာသည့်ဒုတိယမြောက်အများသုံး beta 12.3 beta ကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်။
developer များအနေဖြင့် MacOS Mojave 10.14.5 Beta 1 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple က MacOS Mojave 1 beta 10.14.5 ကို developer များထံရရှိစေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
Apple က macOS 10.14.4 ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် macOS 10.14.4 version ကို download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
developer များအတွက် MacOS Mojave 10.14.4 beta ကို
developer များအတွက် MacOS Mojave 10.14.4 beta version XNUMX ကိုရရှိပြီ
developer များအနေဖြင့် Apple သည်ပဉ္စမ beta Mojave 10.14.4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
developer များအနေဖြင့် Apple သည် MacOS Mojave 10.14.4 ၏စတုတ္ထ beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
developer များအတွက် Apple သည်စတုတ္ထမြောက် MacOS Mojave 10.14.4 beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခင် beta တွင်တင်ပြထားသောသတင်း၏တိုးတက်မှု
MacOS Mojave 10.14.4 developer များအတွက်တတိယ beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
တတိယမြောက် MacOS Mojave, အထူးသဖြင့် ၁၀.၁၄.၄ ဗားရှင်းကိုယခုအခါအက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်သူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
Safari မှ Pop-ups ကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုမလဲ
Pop-up windows များသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအင်တာနက်အတွက်မကောင်းသောအရာဖြစ်လာပြီး browser (ဘရောက်ဆာ) အားလုံးနီးပါးက၎င်းတို့အားမူလကပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ Mac အတွက် Safari မှာသူတို့ကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုမလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်
MacOS Mojave 2, iOS 10.14.4 နှင့် tvOS 12.2 အများပြည်သူ beta 12.2 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
developer account မရှိဘဲအသုံးပြုသူများအတွက် MacOS Mojave 2, iOS 10.14.4 နှင့် tvOS 12.2 အများသုံး beta တို့၏ဗားရှင်း ၂ ကို Apple ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
developer များအနေဖြင့် Apple ၏ဒုတိယ beta Mojave 10.14.4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple က MacOS Mojave 10.14.4 ကိုထုတ်လုပ်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင် developer များအတွက်ဒုတိယ beta Mojave 10.14.3 ကို developer များအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
MacOS Mojave 1 ပြည်သူ့ Beta 10.14.4 ယခုရရှိနိုင်
ပြီးခဲ့သည့်ညက Apple သည်အများပြည်သူသုံး beta 1 macOS Mojave 10.14.4 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးကျန်အများသုံးဗားရှင်းများကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့သည်
MacOS Mojave 10.14.4, iOS 12.2, watchOS 5.2 နှင့် tvOS 12.2 တို့၏ developer များအတွက်ပထမဆုံး beta ကိုရနိုင်သည်
အက်ပဲလ်သည် beta 1 ဗားရှင်းအားလုံးအတွက် Mojave 10.14.4, iOS 12.2, watchOS 5.2 နှင့်တီဗီ 12.2 တို့ကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။
MacOS Mojave 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 နှင့် tvOS 12.1.2 ယခုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်
သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် MacOS Mojave 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 နှင့် tvOS 12.1.2 ဗားရှင်းသစ်အားလုံးကို Apple ကလွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
developer များအတွက် MacOS Mojave4beta 10.14.3 ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ
developer များအတွက် MacOS Mojave3beta 10.14.3 ကိုရောက်ရှိလာသည်
developer များအတွက် macOS 10.14.3 နှင့် tvOS 12.1.2 ၏ beta ဗားရှင်းသစ်
Microsoft အတွက် Remote Desktop ကို MacOS Mojave ရဲ့အမှောင်စနစ်နဲ့အခြားအရာများပံ့ပိုးပေးပြီးမွမ်းမံသည်
Mac အတွက် Microsoft Remote Desktop client ကို update လုပ်ထားပြီး MacOS Mojave dark mode နှင့်အခြားအရာများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်။ ရှာတွေ့သည်!
developer များအတွက် Apple က MacOS Mojave 10.14.3 beta 1 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် macOS 10.14.2 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
MacOS 10.14.2 beta4ကို developer များအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Apple က developer များအတွက်တတိယ beta 10.14.2 beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
developer များအတွက် Apple သည် macOS3Mojave beta 10.14.2 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်၎င်း၏သတင်းနှင့်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
macOS High Sierra တွင်ရှိသော“ Upgrade to macOS Mojave” သတင်းစကားကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
macOS High Sierra တွင်နှစ် ဦး သုံးယောက်တပုံတပုံပေါ်လာသည့် MacOS Mojave ကို update လုပ်ရန်သင်ငြီးငွေ့နေပြီး၎င်းကိုယခုအချိန်တွင်မလုပ်လိုလျှင်၎င်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။
MacBook Air 2018 သည်သီးသန့် MacOS Mojave update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
MacOS 10.14.0 မှအက်ပဲလ်သည် MacBook Air အသစ်အတွက်သီးသန့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်
developer များအနေဖြင့် Apple ၏ဒုတိယ beta 10.14.2 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple သည် MacOS2beta 10.14.2 beta XNUMX ကို developer များအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ ရှာတွေ့သည်!
macOS Mojave တွင် Dashboard ကိုမည်သို့ enable လုပ်ရမည်နည်း
အသုံးပြုမှုနည်းပါးသော်လည်း Dashboard ကို MacOS Mojave တွင်ရရှိနိုင်သေးသည်။ ဤဆောင်းပါး၌၎င်းကိုမည်သို့ activate လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြပါ။
macOS Mojave တွင်အလိုအလျောက်အက်ပလီကေးရှင်းမွမ်းမံမှုများကိုမည်သို့ enable လုပ်ရမည်သို့မဟုတ်ပိတ်နည်း
MacOS Mojave ရှိ App Store မှအက်ပလီကေးရှင်းများအလိုအလျောက်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုသင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မည်သို့ disable လုပ်နိုင်သည်ကိုဤတွင်ရှာဖွေပါ။
MacOS Mojave ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးပါက၊ သင်အရောင်အလွယ်တကူမည်သို့ပြောင်းနိုင်သည်၊ Mac ပေါ်တွင်အရောင်ကိုသင်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ။
developer များတွင် MacOS Mojave 1 beta 10.14.2 ရှိသည်
နောက်ဆုံး MacOS Mojave 10.14.1 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Cupertino မှလူငယ်များသည် MacOS Mojave ဗားရှင်း ၁၀.၁၄.၁ ၏နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်ဆth္ဌမ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
MacOS Mojave ဖြင့် Safari တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အိုင်ကွန်များမည်သို့ပြသနိုင်မည်နည်း
MacOS Mojave ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာသို့သွားသောအခါ Safari tabs များ၌အိုင်ကွန်များမည်သို့ပြသနိုင်ပုံကိုဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ။
ယခု developer များသည် macOS5beta 10.14.1 ကိုကိုင်ထားကြသည်
ဤသည်မှာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း protocol သည် macOS နှင့် iOS အကြားမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
developer များအတွက် Apple က MacOS Mojave 10.14.1 beta4ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
MacOS Mojave 10.14.1 beta3ကို developer များရရှိနိုင်ပါသည်
MacOS Mojave 10.14.1, tvOS 12.1 နှင့် watchOS 5.1 beta2တို့သည် developer များလက်ထဲတွင်ရှိသည်
Mac မှာ HomeKit ရှိပြီဆိုတော့လျှော့စျေးထုတ်ကုန်များစွာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်
အခုတော့ငါတို့ Mac မှာ HomeKit ရှိပြီဆိုတော့လျှော့စျေးထုတ်ကုန်များစွာကိုတွေ့တော့မယ်
MacOS Mojave 1 အများပြည်သူ beta 10.14.1 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Safari သည် MacOS Mojave တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုအနည်းငယ်ဂရုစိုက်သည်
macOS Mojave beta အစီအစဉ်ကိုမည်သို့ချန်မထားရမည်နည်း
အပတ်တိုင်း MacOS Mojave beta အသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်သင်ငြီးငွေ့လာပါကသင်၏ Mac တွင် beta ပရိုဂရမ်ကိုမည်သို့စွန့်လွှတ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
MacOS Mojave တွင်အမှောင်စနစ်တက်ကြွနေပါသလား။ [စစ်တမ်း]
ဤဆောင်းပါး၌ MacOS Mojave တွင်ရရှိနိုင်သည့် Batteries function ကိုမည်သို့မြှင့်တင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်
MacOS Mojave 10.14.1 ၏ beta အသစ်သည် developer များလက်ထဲတွင်ရှိသည်
System Updates များသည် MacOS Mojave လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်သူတို့၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Mac App Store တွင်မတွေ့ရပါ။
macOS Mojave မှာအမှောင်စနစ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးနောက်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောမှောင်မိုက်သည့် mode ကို Apple ကွန်ပျူတာများဖြစ်သော Mojave ဗားရှင်းသစ်တွင်ယခုရရှိနိုင်ပြီ။ ၎င်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
MacOS Mojave ကိုဘယ်ကနေ install လုပ်မလဲ
ဤရွေ့ကား macOS Mojave ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်
macOS Mojave အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
MacOS Mojave သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
MacOS Mojave သည်ယခုအခါသုံးစွဲသူများအားလုံးရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
MacOS Mojave တွင်တတိယပါတီအက်ပ်များကိုမည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
သင်၏ Mac တွင် third-party application များကို macOS Mojave ဖြင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်လိုပါကသင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။
MacOS Mojave ကိုမကြာခင်စတင်ရန်ပြင်ဆင်ပါ
MacOS Mojave မထွက်ခင်တစ်ပတ်အကြာမှာပဲ
MacOS Mojave ၏ဒသမမြောက် beta သည်ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Cupertino မှယောက်ျားများသည်နောက်လာမည့် version ၏ developer များအတွက် developer များအတွက်ဒသမ beta ကိုစတင်ခဲ့သည်။ MacOS Mojave ၏ဒသမ beta သည်ယခုအချိန်တွင် download ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း developer များအတွက်သာဖြစ်သည်။
Mojave Dock တွင်မကြာသေးမီကအသုံးချပရိုဂရမ်များရှိလိုလျှင်ပြင်ဆင်ပါ
Mojave macOS ဟာထောင့်မှန်မှာပါ။ လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကမှနောင်လာမည့် ၁၂ နေ့၏ Apple သော့ချက်၏နောက်ဆုံးရက်ကိုကျွန်တော်တို့သိထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် MacOS Mojave Dock တွင်မကြာသေးမီက application များရှိလိုပါက system preferences မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်လျှင်သင်ကျွန်ုပ်တို့ကို configure လုပ်လိမ့်မည်။ ဤဗားရှင်းတွင်အားသာချက်များနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်
developer များအတွက် Apple MacOS Mojave beta9ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Apple သည် developer များအတွက် macOS Mojave beta9ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ တနင်္လာနေ့တွင် beta များတင်ပို့ခြင်းအစဉ်အလာအတိုင်း Apple သည်နောက်ဆုံး beta စတင်ပြီးတစ်ပတ်အကြာတွင် developer များအတွက် macOS Mojave ၏ beta9ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရွှေမာစတာမျှော်လင့်ရသည်
MacOS Mojave beta 8 ကို developer များနှင့်အများသုံး beta အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Apple သည် developer များအတွက် macOS Mojave beta 8 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် developer များနှင့်အများပြည်သူ beta ၏သုံးစွဲသူများအတွက်ဖြန့်ချိသော MacOS Mojave beta 8 ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်ထပ်တူပြုခဲ့ရာနောက်ဆုံးဗားရှင်းနီးပြီဟုဆိုလိုသည်။
Group FaceTime ခေါ်ဆိုမှုများကိုနောက်ဆုံးပေါ် beta များမှဖယ်ရှားခဲ့သည်
မနေ့ကနေ့လည်ခင်းထုတ်ပြန်သော beta ဗားရှင်းတွင် developer များတွေ့ရှိခဲ့သောအရေးကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ...
MacOS Mojave beta7ကို developer များအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
ယနေ့တနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်းသည် beta ဗားရှင်းများကိုမရပ်မနားဖြစ်စေသည်၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလာသည်။
ကျွန်ုပ်၏ HD TV, MacOS Mojave ပါသော Mac နှင့် antialiasing အသစ်နှင့်ဘာလဲ
ယခုတွင်သင်သည်အများသုံး betOS Mojave, iOS 12 နှင့် tvOS 12 တို့၏အများပိုင် beta များကို install လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်
ယမန်နေ့ကပဲ developer များက MacOS Mojave, iOS 6, beta 12 ဗားရှင်းတွေရရှိကြသည်။
ဆဌမမြောက် MacOS Mojave ၏ beta သည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်သည်
ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမွန်းလွဲပိုင်းမွန်းလွဲပိုင်းတွင် Cupertino မှယောက်ျားများစတင်မိတ်ဆက်သော MacOS Mojave beta6ကိုထပ်ဖြည့်သည်။
MacOS Mojave, watchOS5နှင့် tvOS 12 developer betas များထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
မနေ့ကပဲ betos6version macos Mojave, watchOS5နဲ့ tvOS 12 တို့ကို developer တွေအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဒီထဲမှာ ...
နောက်ဆုံးပေါ် macOS Mojave beta မှနောက်ခံပုံအသစ်များကိုကူးယူပါ
နောက်ဆုံးပေါ် beta ဗားရှင်းများတွင် Apple သည်နောက်ခံပုံအသစ်များကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအမြဲတမ်းထည့်ပေးသည်။
Apple သည်စတုတ္ထမြောက် MacOS Mojave ၏အများသုံး beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နာရီများအတွင်း macOS public beta ပရိုဂရမ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူများအားလုံးသည်စတုတ္ထမြောက် Apple သို့နောက်ဆုံးသတင်းတင်ပြီးနောက်နှစ်ပတ်အကြာတွင်စတုတ္ထမြောက်အများသုံး beta ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သည်။ သင့်အား beta အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန်သင့်အားသင်ကြားပေးပါသည်။
MacOS Mojave Beta5တွင်ရရှိနိုင်သည့် iMac နှင့် MacBook Pro အတွက်နောက်ခံပုံအသစ်များကိုကူးယူပါ
Cupertino မှယောက်ျားများသည် beta ၏စက်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီရှိသည့် operating system အားလုံးအတွက် beta များကိုစတင်ခဲ့သည်။ MoOS ၏ပဉ္စမ beta သည် Mojave မှကျွန်ုပ်တို့ကိုဤဆောင်းပါး၌ download ဆွဲရန်အတွက်ရှုခင်းများနောက်ခံပုံအသစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။
MacOS Mojave သည်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံအသစ်တစ်ခုကို beta4တွင်ထပ်ထည့်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် betOS ဗားရှင်း Mojave သည် developer များအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေသည်။
MacOS Mojave ၏တတိယမြောက်အများသုံး beta သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အများသုံးဗားရှင်းတွင် MacOS Mojave သုံး beta ဗားရှင်းသုံးခုရှိပြီးဖြစ်သည်။
ယခု MacOS Mojave developer များအတွက်စတုတ္ထမြောက် beta သည်
များစွာသောအားလပ်ရက်များမှာသင်ရှိနေသော်လည်းများသောအားဖြင့်နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လတွင်အားလပ်ရက်များမရှိဘဲ Apple အင်ဂျင်နီယာများဖြစ်ကြပြီး Cupertino မှယောက်ျားများသည် MacOS Mojave တီထွင်သူများအတွက်စတုတ္ထ beta ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး MacBook Pro 2018 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
MacOS Mojave ဒုတိယပြည်သူပိုင် Beta ယခုရရှိနိုင်
ဒုတိယအများသုံး MacOS Mojave ၏ beta ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သူများအားယခုရရှိနိုင်သည်။
MacOS 10.14 အတွက်တတိယ beta ကိုယခုအခါရရှိနိုင်ပါပြီ
Betas နေ့လည် (စပိန်အချိန်) ။ Cupertino မှယောက်ျားများသည် operating system အားလုံး၏ beta များကိုဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။
Multi-user ခေါ်ဆိုမှုများသည် FaceTime 5.0 တွင် MacOS Mojave နှင့်ဆင်တူသည်
ဤသည်မှာ FaceTime 5.0 တွင် MacOS Mojave အတွက် multi-user ခေါ်ဆိုမှုပုံစံဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသုံး ဦး မှ စတင်၍ သူတို့သည် FaceTime interface ကိုစတင်လွှင့်ကြသည်။
အများသုံး beta 1 ကိုသင်၏ Mac တွင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
သတိရသင့်သည်မှာပထမအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ဤဗားရှင်းနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့အရာဖြစ်သည်။
MacOS Mojave အများသုံး beta 1 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
မနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းမှာ beta ဗားရှင်းနေ့လည်ခင်းဖြစ်ပြီး Apple ကအများပြည်သူသုံး beta version အားလုံးကိုထုတ်ပေးသည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ Apple ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် macOS ၏သတင်းအားလုံးကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်
နှင့်အသစ်ဗားရှင်း၏ကျန်။ Apple က operating system ကိုတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာဝဘ်ကို update လုပ်ပေးသည် ...
MacOS Mojave Beta2ကိုလွယ်ကူစွာအပ်နှံပါ
MacOS Mojave developer များအတွက် beta version ကိုသင်၏ Mac တွင်ထည့်သွင်းထားသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ယခု ...
macOS Mojave ကို၎င်း၏ beta ဗားရှင်းတွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်စီးပွားရေးမစတင်မီ beta ဗားရှင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်မသင့်လျော်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်။
Apple က MacOS Mojave အသစ်၏ beta2ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
Continuity protocol သည် iPad နှင့် Mac သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလား။
MacOS ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ Mojave သည် Mac operating system ကိုများစွာဖြစ်စေသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ ...
အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကိရိယာအများစုသည် MacOS Mojave တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်
ယခုအပတ်တွင် MacOS Mojave ၏ beta တစ်ခုအားသုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။
MacOS Mojave အတွက်တရားဝင်မဟုတ်သောပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ
ပထမဆုံးတရားဝင်တရားဝင် MacOS Mojave ၏နောက်ခံပေါ်လာသည်။ macOS Mojave ၏တင်ပြချက်သည်ရန်ပုံငွေများကိုပိုမိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်
Mojave သည် Cross-platform ကိုမည်ကဲ့သို့လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။
WWDC 2018 ၏အဖွင့်တင်ဆက်မှုအဖြစ် Apple ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသော့ချက်မှာအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
MacOS Mojave သည် HTC Vive Pro ၏ virtual reality မျက်မှန်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်
Macs အတွက် Apple operating system ၏နောက် version သည် HTC Vive Pro ၏ virtual reality မျက်မှန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။
MacOS Mojave တွင်ဆော့ဖ်ဝဲ updates သည် System Preferences သို့သွားသည်
MacOS Mojave သည်ကျွန်ုပ်တို့အား AirDrop မှတဆင့်စကားဝှက်များကိုဝေမျှနိုင်သည်
MacOS Mojave သည်ကျွန်ုပ်ကို AirDrop မှတဆင့် iOS ထုတ်ကုန်များသို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်ကူစွာပေးပို့နိူင်သည်။
စမ်းသပ်ဘရောက်ဇာ Safari Technology Preview 58 သည် macOS Mojave နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်
မွမ်းမံမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ခံသောဘရောင်ဇာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Safari ဖြစ်သောစမ်းသပ်မှုဘရောက်ဇာ၏ဗားရှင်းလည်းဖြစ်လျှင် ...
MacOS Mojave အသစ်မှာ Dark mode ကိုဒီနည်းက activate လုပ်တယ်
Safari သည် macOS Mojave နှင့်အတူမျက်နှာသာပေးမှုကိုထောက်ပံ့သည်
နောက် MacOS Mojave Safari ၏မူကွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများ၏မျက်နှာသာပေးမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Back to my Mac feature သည် MacOS Mojave မှပျောက်ကွယ်သွားသည်
အင်တာနက်ပေါ်မှအခြား Mac မှလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော Back to my Mac feature သည် macOS Mojave ရှိ iCloud ဆက်တင်မှလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။
MacOS Mojave တွင်ဖိုင်များသိုမဟုတ် stack
အမှန်မှာ macOS 10.14 Mojave ၏အသစ်အဆန်းများသည်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချို့ ...
APFS ကို hard drive များနှင့် MacOS Mojave ရှိ Fusion Drive များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်
စက်တင်ဘာလမှစတင်ကာ macOS Mojave တွင် APFS ကိုရိုးရာသို့မဟုတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ hard drive များအပြင် Fusion Drive အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
MoOS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter နှင့် Facebook အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်မပြုပါ
ပထမဆုံး MacOS Mojave beta သည် operating system မှတွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
အဖွင့် WWDC 2018 ကွန်ဖရင့်၏အဓိကမှတ်တမ်း၏ဗီဒီယိုကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်
WWDC 2018 တင်ပြချက်၏အဓိကဗီဒီယိုကို Apple ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း YouTube ကိုရက်အနည်းငယ်လောက်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။
HomeKit ကိုထိန်းချုပ်ရန် iOS Home application သည် macOS Mojave သို့ရောက်ရှိသည်
MacOS Mojave တွင်ထည့်သွင်းထားသော Home application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုအသုံးမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Scoshots တွေက MacOS Mojave အသစ်မှာပိုကောင်းလာတယ်
QuickLook သည် MacOS Mojave အသစ်တွင်ဗီတာမင်များရှိသည်
Apple ကွန်ပျူတာများ၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်နေ့စဉ်အသုံးပြုသောအရာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် ...
iOS နှင့် macOS များသည်နီးကပ်သော်လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါ
ဒီဟာကအက်ပဲရဲ့ Craig Federighi ပြသခဲ့တဲ့အချိန်ရဲ့နောက်တစ်ခုပါပဲ ...
ဤရွေ့ကား MacOS Mojave နှင့်သဟဇာတ
Mac software သည်အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းနှင့်၎င်း၏ကွန်ပျူတာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်မှာသေချာသည်။
MacOS Mojave Finder တွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်
MacOS Mojave ရှိ Finder မှဖိုင်အသစ်များနှင့် Finder ကိုယ်တိုင်မှဗွီဒီယိုကိုချုံ့ခြင်းမှ PDF တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းသည်အဓိကအသစ်အဆန်းများအဖြစ်ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
macOS Mojave, Mac OS အမည်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်
သူဟာဘယ်တော့မှမလာဘူး၊ နောက်ဆုံးမှာ Craig က Mac အတွက် OS အသစ်အကြောင်းပြောပြဖို့ထွက်လာတယ်။ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ...
MacOS 10.14 ၏ screenshots များပေါက်ကြားနေပြီဖြစ်သည်။ Dark Mode အသစ်၊ Mac အတွက် Apple News application ကိုအခြားသူများအကြား၌တွေ့ရှိရသည်
Developer Steve Troughton Smith မှပထမ ဦး ဆုံးမျက်နှာပြင် screenshots များကိုစစ်ထုတ်စနစ်အရမှောင်မိုက်သော mode ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
macOS 10.14 ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ။ [စစ်တမ်း]
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် Mac မှ Apple ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားမည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမည်များအကြောင်းပြောခဲ့သည်။
နောက် macOS ရဲ့ version ကတော့ ...